Thadinoo – Page2– News
မန္တလေးမြို့တွင် အိမ်အကူမိန်းကလေးကို မျက်လုံးတစ်ဖက်ကွယ်ကာ မျက်နှာတစ်ခြမ်း ပျက်စီးသည်အထိ အက်စစ်ဖြင့် ပက်ခြင်း၊ ရှစ်နှစ်ခန့်ကြာ ပိတ်လှောင်ထားခြင်းတို့ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အိမ်ရှင်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးအားအရေးယူ။
March 3, 2018 Ko Ko Mg Leaveacomment
မန္တလေးမြို့တွင် အိမ်အကူမိန်းကလေးကို မျက်လုံးတစ်ဖက်ကွယ်ကာ မျက်နှာတစ်ခြမ်း ပျက်စီးသည်အထိ အက်စစ်ဖြင့် ပက်ခြင်း၊ ရှစ်နှစ်ခန့်ကြာ ပိတ်လှောင်ထားခြင်းတို့ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အိမ်ရှင်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးအား မတ် ၁ ရက်က ဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်ထားကြောင်း မန္တလေးတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သတင်းရရှိသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ခန့်က ရွာငံမြို့နယ်…
ပုရိသတွေကို ဂျွမ်းထိုးမှောက်ခုံကျစေမဲ့ အကွက် ၄၀ (သို့) မိန်းမတို့မာယာ (၄၀) ဖတ်ဖြစ်အောင်ဝင်ဖတ်သွားသင့်တယ်နော်
ပုရိသတွေကို ဂျွမ်းထိုးမှောက်ခုံကျစေမဲ့ အကွက် ၄၀ (သို့) မိန်းမတို့မာယာ (၄၀) ဖတ်ဖြစ်အောင်ဝင်ဖတ်သွားသင့်တယ်နော် မိန်းမမာယာ သဲကိုးဖြာလို့ တင်စားသမုတ်ကြကုန်၏။ အမှန်စင်စစ်အားဖြင့် သဲကိုးဖြာ မကပေ။ စာရှိအဆို ကျမ်းရင်းလာတွင် မာယာအပါး (၄၀)…
အောင်လအန်ဆန်းလိုလူမျိုးကိုတောင် အပြစ်ပြောချင်သူတွေနဲ့ အောင်လအန်ဆန်းကို လေးစားသူတွေဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါ။
အမျိုးဂုဏ်မြှင့်တင်သူ အောင်လအန်ဆန်” ဒီ Articleလေး ရေးရခြင်းက ကိုအောင်လအန်ဆန်လို လူမျိုးကိုတောင် အပြစ်ပြောချင်သူတွေ ရှိလို့ပါ။ အောင်လအန်ဆန်ဟာ ကမ္ဘာနဲ့ယှဉ်ပြီး မြန်မာ့သွေးဘယ်လောက်ရဲလဲဆိုတာ စစ်တိုက်အနိူင်ယူပေးခဲ့သူပါ။ဘယ်လောက်ဂုဏ်ယူစရာကောင်းလဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ တကယ်တော့ စစ်တိုက်ပြီးအနိူင်ယူမှ ကမ္ဘာကို နိူင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အခုလို နိူင်ငံတွေရဲ့…
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မဟုပ်ကြောင်း သက်သေပြလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ရဲတိုက်
သရုပ်ဆောင်ရဲတိုက်ကတော့ တစ်ချို့ပရိသတ်တစ်ချို့က အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်လို့ထင်နေကြပါတယ် သရုပ်ဆောင်ရဲတိုက်ကတော့ ကျွန်တော် ဘယ်ဘာသာကို ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာ ရှင်းပြနေစရာမလိုပါဘူး ကျွန်တော့်ရဲ့ စိတ်ရင်းခံကိုကခုပရိသတ်ကြီးမြင်တဲ့အတိုင်းပါဘဲ ခုဆို ချစ်ပရိသတ်ကြီး ယုံကြည်လောက်ပါပြီ ခုလိုတစ်မျိုးထင်နေတဲ့ ပရိသတ်ကို ခုလိုသက်သေပြရလို့ လွန်စွာပီတိဖြစ်ပြီး ဂုဏ်ယူမဆုံးဖြစ်နေရပါတယ်လို့ ရဲတိုက်က shwe…
ယောက်ျားတွေ ငတ်ပြတ်နေတဲ့အခါ ဘယ်လိုမိန်းကလေးတွေကို ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားတတ်လဲ?
ယောက်ျားတွေ ငတ်ပြတ်နေတဲ့အခါ ဘယ်လိုမိန်းကလေးတွေကို ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားတတ်လဲ ဆာလောင်နေတဲ့အခါ အမျိုးသားတွေက ဘယ်လိုမိန်းကလေးတွေကို ပိုစိတ်ဝင်စားလဲ လေ့လာမှုအသစ်တစ်ခုအရ ဆာလောင်နေတဲ့ အမျိုးသားတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်ပိုကြီးတဲ့ အထူးသဖြင့် ရင်သားပြည်ဖြိုးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ ပိုထင်ကြကြောင်း သိရပါတယ်။ ယင်းတွေ့ရှိချက်ကို…
အသက် ၁၉ နှစ်သာ ရှိသေးတဲ့ သူခိုးမလေး
March 2, 2018 Ko Ko Mg Leaveacomment
အသက် ၁၉နှစ်နဲ့ မိုက်လိုက်တာ ဘာလို့ဒီလိုအလုပ်လုပ်ရတာလဲ နှမြောစရာကောင်းတာနော်…. ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ Mandaue, Cebu မှာ နေထိုင်တဲ့ Jobelle လို့ အမည်ရတဲ့ အသက် 19 နှစ်အရွယ် ကောင်မလေးဟာ သူမရဲ့ လက်ရှိ ရုပ်သွင်အလှအပကြောင့်…
GTI ကျောင်းသားလေးရဲ့ ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ လက်နှစ်ဖက်ကို အစားထိုးဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ပညာရှင်များ
GTI ကျောင်းသားလေးရဲ့ ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ လက်နှစ်ဖက်ကို အစားထိုးဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ပညာရှင်များ GTI ကျောင်းသားလေးရဲ့ ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ လက်နှစ်ဖက်ကို အစားထိုးဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ပညာရှင်များ ထူးထူးဆန်းဆန်းproject လေးတခု ချင်းပြည်နယ်မှGTI ကျောင်းသားလေးတယောက်အိမ်ခေါင်မိုးတက်ပြင်ရင်းဓါတ်လိုက်ပြီးလက်နှစ်ဖက်လုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရလို့အမေဖြစ်သူကမျော်လင့်ချက်အပြည့်နဲ့ဆက်သွယ်လါပါတယ်၊ ဖြတ်ထားရတဲ့အနေအထားမှာအလွန်တိုလွန်းပြီး လက်တုပြုလုပ်ရန်…
​ဖောက်​ပြန်​ဖို့​သေချာသ​လောက်​ရှိတဲ့ ​စော်​​ တွေရဲ့ပုံစံသိလိုသူများ..
​ဖောက်​ပြန်​ဖို့​သေချာသ​လောက်​ရှိတဲ့ ​စော်​​ တွေရဲ့ပုံစံသိလိုသူများ.. (၁) ပစ္စည်းဥစ္စာမက်​တဲ့​စော်။ဒီလိုမိန်းက​လေးမျိုး​က ပစ္စည်းဥစ္စာအ​ပေါ်အရမ်းတန်​ဖိုးထားတဲ့သူ​တွေ​ပေါ့။ သူမဟာ ဟိုဟာဝယ်​ဖို့၊ ဒီဟာဝယ်​​ပေးဖို့ အမြဲသင့်​ကိုပူဆာ​နေမှာပါ။ သင်​ဝယ်​​ပေးဖို့ငြင်းလိုက်​ရင်​လည်း သင်​သူ့ကိုမချစ်​ဘူးလို့ သူမထင်​မှာပါ။ သင်​ဝယ်​​ပေးနိုင်​တုန်း​တော့ သင့်​ကိုချစ်​နိုင်​​ပေမယ့်​ သင်​မဝယ်​​ပေးနိုင်​​တော့တဲ့တစ်​​နေ့မှာ တခြားအ​ကောင်​ကြီးကြီးတစ်​​ယောက်​ကို သူမအချစ်​​တွေသိမ်းကျုံး​ပေးလိုက်​မယ့်​မိန်းမမျိုး​ပေါ့။ ၂)…
လူတစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကို သိရုံနှင့််အဲဒီလူရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကိုပါ သိနိုင်အောင် တွက်ကြည့်နည်း (လွယ်လွယ်လေးပဲနော်)
လူတစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကို သိရုံနှင့််အဲဒီလူရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကိုပါ သိနိုင်အောင် တွက်ကြည့်နည်း (လွယ်လွယ်လေးပဲနော်) သင့်ရဲ့ နာမည်ကို ကြည့်ပြီး သင့်ရဲ့ စိတ်နေ သဘာဝ ကို အကြမ်းဖျင်း တွက် လို့ ရတဲ့ နည်း ရှိတယ်။ သင့်ရဲ့လူသိများသောအမည်ကိုအောက်ပါအတိုင်းတွက်ပါ။…
ရွှေထူးက သဘောကျတဲ့ဆိုတဲ့အပေါ် မိုးဟေကိုကပြန်လည်တုန့်ပြန်လိုက်ပြီ။
ရွှေထူးက သဘောကျတဲ့ဆိုတဲ့အပေါ် မိုးဟေကို ရဲ့တုံ့ပြန်စကား ပရိသတ်အချစ်တော် ရွှေထူးတစ်ယောက်ကတော့ မကြာသေးခင်ကမှ I ဆိုတဲ့ တစ်ကိုယ်တော် Album လေး တစ်ခွေ ထွက်ရှိထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ပရိသတ်အချို့ရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ပြီး ရွှေထူးအနေနဲ့ကတော့ တည်ငြိမ်အေးဆေးစွာ ဖြေရှင်းတုံ့ပြန်ထားတာကိုလည်း…